Maxaa Yoomal ciidkan guriga, Dumarka iyo Caruurtu joogaan kugu soo celiyay? - somalilandlivemedia
Maxaa Yoomal ciidkan guriga, Dumarka iyo Caruurtu joogaan kugu soo celiyay?
12:15 3. September 2017
Maalin Qayilkii Faarax
dee dee iska yara jiifso ayaan lahaa,!
Maxaa yomalciidkan kujiifinaya miyaad jirantay!
dee dee xagee Qabtaa?
waar mooyi meesha qayraa qabtay ayaad Qaban lahayd inta aad guriga noo dhexjiifsanayso Yoomal ciidkan !!
intaas iyo hiiftaan, buuf buuf wehesho markay isugu dartay ayuu albaabka kabooday isaga oo cadho jiq ah.
habeen hore Cawaysinkii ayuu maqlayay markii saaxiibadii kubalamayeen in ay maalinta Ciida Jilbaha laabayaan waliba waa kuwii kubalamayay in ay xaafada helaayo, iyo helaayo joogaan Qolka fadhiga maalintaas iyaga loosii xidho.
lefoonkii ayu lasoo baxay si uu uga wardoon halka ay fadhiyaan, waase, dam “”””Lambarka aad Wacday wuu xidhanyay Fadlan isku day mar danbe !”” Xagal Caleen ah ayuu ka xantoobsaday kolay suuqa dhexdiisa ah waxase warwar ku haya halkii uu dabaa dhigi lahaa, Faarax Muqayil Celeen ruug ah muu ahaan jirin balse wixii uu guriga kala kulmay Yoomal ciidkan ayaa maanta kalifay.
fikir dheer kadib ayuu go,aan kugaadhay in uu raaco Bas agtiisa ka rakaabsanayay oo dalcada Ilaacada kabaxay, markii uu Radio Hargaysa Waqooyi Galbeed Xiga ula dhaafay ayaa yaqiinsaday in uu kadhex baxay Aagii laga yaqaanay, Mukhaaxi Dheega laysku hayo oo uba muuqatay mid buuxday ayuu boos kaciidhsaday. Markiiba falaasad Shaah ah Baakhid Sigaar ah iyo Waliba jeeg Biyo ah oo isku gaashaaman ayay Mid kamida laba dumara oo mehereda haystay isku soo dulsaartay biyaha iyo shaaha garay sigaarkase macabi jirin balse waxa uu kaxishoday in uu Mukhaaxida buuxda dhex yidhaahdo sigaarka macabo ee iga celi , waxa uu kasii qabay in Bakhayl lamoodo, Huuno ma hal Barikin ah ayaan kuudiraa mise Laba? ayay qaab jajabnaani kamuuqato Inantii labaad ee Meheradu u waydiisay, Markiiba waxa uu yidhi Inaader/Walal, laba Barkimood ii dalab, Barkintu waa kiro oo hore ayaa loogu sheegay Faarax in 3$ Dollar lagu kireeyo halkaasna waxa uu kabaqay hadii uu mid qudha qaato in jeeb Xumaan lagu Xanto.
Markiiba waxa ladareemay in faarax Xaafada Baadi kuyahay jawaabaha uu bixinayay marka dalabka laga qaadayay ayaa laga fahmay, Meheradase kuma cusub faarax oo kale oo dhowrkii Sanno ee lasoo dhaafay waxa siyaabo kala duwan usoo maray Muqayiliin Reer Bari ah Xukuumada Siilaanyo soo dhex raacay markii ay Dalka qabsatay.
Markii labada barkin ah loo keenay hawshuna hada dhantay ayuu Muqayilkii ku yidhi huuno Qayil wanaagsan, wax waliba waa dhanyiin ee madaxa Furo!
Madaxa furo,da danbe ayuu Faarax Qoonsday!
Lasoco Qaybta danbe iyo Maalin Qayilkii Faarax wixii kala gaadhay–
Ciid Bugaarig / Eid Aden
Deg-Deg Halkan ka Daawo : Shacabka Caasimada Hargeisa oo Mudaharaad ku dicaafay Iibinta Mayorka Ee iskuulka Riis oo lagu wado lacagta ka soo baxda In MUUSE BIIXI ku galo ololaha Doorashada
Gudoomiyaha Xisbiga UCID Eng Faysal Cali Waraabe Oo Hadhimo Sharafeed Ku Maamuusay Haween-Waynaha Degmada Axmed Dhagax Iyo Gobolka Hawd .
Madaxtooyada Somaliland oo lasheegay in ay Ciidama Beeleed Qoratay
Jabhadu, lixda gobolba way kajirtaa dhawaana waxa ay bilaabaysaa Amaradii aanu Bixinay, Muuse Biixi Dagaal ayuu Siyaasada kayaqaana kaasna Anaga ayaa lanaqaana Kornay Caare oo hadlay
Xisbiga WADDANI oo Xalay Xaflad Ku Qaabiley Macalimiin, Dhallinyaro iyo Taageerayaal Ka Soo Dig-rotay Xisbiyada KULMIYE iyo UCID
Newer PostBarmaamijii Salaamaha Ciida ee SAABTV- kaqabtay, Jaaliyada Somalida ee Frankfurt
Older Post Wararkii ugu Cuslaa ee uu Maanta Daabacay Wargeeska Yool halkan kaga Bogo